Our warshad gaadhay shahaado ICTI International Toy Association, ISO9001: 2008 maaraynta tayada nidaamka shahaado, EU BSCI hortago shahaado masuuliyada bulshada iyo shahaado FSC. safafka Our alaabta ka mid ah alaabta lagu ciyaaro waxbarashada, guryaha caruusada, sets tareen, xujooyinka alwaax, alaabtii muusikada, blocks alwaax iwm Si keeni wiil kasta & gabar macaan, ku faraxsan yahay, carruurnimada cajiib ah waa fariin uu wanaag.
All alaabooyinka yihiin macmalay tayada sifo oo fiiro gaar ah u faahfaahsan inay la kulmaan shuruudo macaamiisha ee. Waxaan u furan yihiin si ay u sameeyaan wax soo saarka OEM sida ay design macaamiisha. Iyada oo waayo-aragnimo qani ah oo aqoon xirfadeed ku saabsan alaabta & farshaxan, waxaan idin siin doonaa talo wanaagsan, taas oo ka dhigi waxyaabaha aad ammaan noqotay oo dhan imtixaanka loo baahan yahay oo ay leeyihiin iibka wanaagsan ee suuqa.